Uma ufuna ukukhulisa isitshalo esikhulu, futhi ubukhulu besakhiwo buphansi, imibhede emibala - indlela elula futhi ephumelelayo yokuphuma. Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo sokugoba futhi ukulimaza umhlane wakho.
Imibhede ejwayelekile ezweni: kungani edingekayo?
Wake wahlangabezana nenkinga lapho izwe litholakala kalula, kodwa inhlabathi ayifanele ngokuphelele ukutshala izitshalo ezithile? Noma isimo sezulu endaweni yakho akuhlosiwe ngokuphelele ukutshala izitshalo ze-thermophilic, futhi ufuna ngempela ukujabulela izithelo. Zonke lezi zinkinga zingaxazululwa ngosizo lokulima okulula.
Ngaphezu kwalokho, isikhala esiteshini sakho sisetshenziselwa ngokulingana ngangokunokwenzeka. Akuzona zonke izitshalo ezingakhula endaweni eqondile, kepha kuzoba khona isikhala esanele uma ezinye zikhona endaweni ephakeme. Enye inzuzo yokulima okunjalo ukungabikho kokuxhumana nenhlabathi. Ngakho-ke, ngeke uhlangabezane nenkinga yamagundane noma ezinye izinambuzane. Ukwakha imibhede enjalo kulula futhi akukho isidingo sokusebenzisa imali eningi.
Imibhede emibili ngezandla
Uma unquma ukuzama ukutshala ngokuqondile kwezitshalo, kufanele uzijwayele ngezindlela eziningana zokwenza imibhede. Ake sicabangele izinhlobonhlobo ezinhlanu ezilula, njengoba kungenzeka ukwenza imibhede eqondile:
Indlela yokuqala ihilela ukusetshenziswa kwamathanga epulasitiki. Futhi, okunamathiselwe nokuqedwa kwekhanda kuyadingeka. Emdongeni sihlanganisa ama-slats enkuni ebangeni elingama-50 cm komunye nomunye. Maka indawo yocingo ngalinye bese unamathisela amapuleti wokuphela, sizofaka imifino kuzo. Ungakhula izitshalo ngezindlela ezimbili: izitshalo zezitshalo noma ubeke izimbiza ngezithombo ezilungiselelwe.
Ungenza i-pallet yokhuni. Uzodinga i-pallets yokugcina impahla, u-burlap slicing, indwangu yensimu. Ngaphakathi ngaphakathi kolunye uhlangothi lwebhokisi esixhumene ne-burlap (ibanga eliphakathi kwezinto eziyisisekelo esincane kufanele lingadluli ku-10 cm). Ingemuva kwebhokisi ihlanganiswe nefilimu. Sishiya kuphela ukuphela okuphezulu kwe-pallet evulekile. Siphalazela inhlabathi kuze kuvulwe ivolumu yangaphakathi. Khona-ke senza okushiwo yi-burlap bese sihlwanyela imbewu. Ngenkathi isithombo singathathi izimpande, i-pallet igcinwa endaweni enezingqimba. Lolu khetho lufanelekile kakhulu ekutshaleni amakhambi kanye namakhambi.
Uma usenayo i-counter yezinkuni zewayini noma umane ube neshidi leplywood eliqinile, ungenza imibhede emihle ngezandla zakho futhi uphume kuzo. Isakhiwo silungiswa kanje: ngakwesokunxele, i-rack iqiniswa ngetheni, egcwele izimbobo zama-coconut nxazonke bese i-seedbed. Lolu khetho lufanelekile izitshalo ezidinga inani elikhulu lokugeleza.
Imibhede emibili yamabhodlela eplastiki. Uma uthatha isinqumo sokutshala izitshalo ngesimiso esingajulile, le ndlela ifaneleka kakhulu. Ebhodleleni lepulasitiki (elivaliwe yisembozo) sidoba umgodi wokutshala izithombo, ezinhlangothini zokunqunywa kwezinto kukhona izimbobo ezimbili zokugcizelela intambo. Emdongeni, sibopha isilwane bese sibeka ibhodlela elenziwe ngokwenza.
Isikhumba sePlastiki. Imibhede emihle yamakhukhamba nezitshalo ezifanayo zingenziwa esikhwameni esikhulu se-polyethylene. Ubude bayo kufanele bube ngamamitha ayisigamu nesigamu, ububanzi obungaba ngu-50 cm ekusekeleni ngendlela yombhobho onamathisele phansi esikhwameni. Isikhwama sigcwele kuqala nge-foam, bese-ke nge-substrate yezingxenye ezintathu zomquba, 1 ingxenye ye-turf emhlabathini nomlotha. Ukusuka ngezansi, imibhede eqondile yamakhukhamba ihlanganiswe nge-ruberoid. Izimbobo zenziwe nge-triangles ebangeni lika-15 cm komunye nomunye. Kuzo, imbewu ehlwanyelwe yatshala. Imibhede enemibala ikuvumela ukuba ukhule izitshalo eziningi ngisho nangaphansi kwezimo ezimbi futhi ugweme izinkinga ngezinambuzane nezinambuzane.
Indlela yokusika ama-roses ebusika?
Iphi ikhofi ekhula kuphi?
Ikhalenda Lunar ye-Florist
Ukuchelela ukuchelela endaweni yokushisa
On amaqabunga aple twist - yini okufanele uyenze?
Viola ampel - ekhula kusuka imbewu
Coat Woza Prima
Indlela ukupheka amakhowe omisiwe?
Izigqoko ezimfushane - amamodeli amahle kunawo wonke futhi enemfashini yenkathi entsha
I-Sazan kuhhavini - zokupheka okumnandi kunayo yonke yezinhlanzi zokubhaka
Umthandazo wesifazane okhulelwe
Indlela yokushefa kahle?
Indandatho ebiza kakhulu kunazo zonke emhlabeni
Isobho se-Seafood - iresiphi
Amashayimu wokuzikhanga - 2015
Imikhiqizo equkethe i-folic acid
Ukusebenza kubonakala kanjani?
I-bestseller ye-Culinary ye-Culinary izokufundisa ukuthi ungalungiselela kanjani ukudla okunempilo ngokushesha
Ungadwengula kanjani i-T-shirt?
I-microwave ayishisi, kodwa isebenza - yini okufanele ngiyenze?
Umquba wezimayonnaise ze-pie nenhlanzi
Izindwangu zokuguqulwa kwensimu
Utamatisi "U-Snowman F1"
Ukugonywa ngokumelene ne-yellow fever